Ihowuliseyili BH-485-DD-0.1 Umenzi woluvo lokuSebenza kwedijithali kunye noMthengisi | IBOQU
Isikhokelo kuMlinganiso wokuSebenza ngokuKwi-Intanethi
Nguwuphi umgaqo osisiseko wokuqhuba kwemitha?
· Angasebenza ngokuzinzileyo ixesha elide.
· Yakhelwe kwisivamvo seqondo lobushushu, imbuyekezo yexesha elifanelekileyo lobushushu.
Iziphumo zeempawu ze-RS485, amandla anamandla okuphazamisa ukuphazamiseka, uluhlu lwezinto ezifikelela kwi-500m.
Sebenzisa iModbus RTU (485) inkqubo yonxibelelwano.
Umsebenzi ulula, iiparameter ze-electrode zinokufezekiswa kuseto olukude, ulungelelwaniso olukude lwe-electrode.
· 24V DC umbane.
Egqithileyo I-BH-485-DD-0.01 yokuSebenza kwedijithali yokuSebenza
Okulandelayo: I-BH-485-DD-1.0 Isenzi sesenzi sokuSebenza kwedijithali
Ukuqhuba: 0-200thina / cm Ubushushu: (0 ~ 50.0) ℃
Ukuqhuba: ±0.2 thina / cm Ubushushu: ± 0.5 ℃
Ukuqhuba: 0.1us / cm Ubushushu: 0.1 ℃
I-12 ~24V DC
I-RS485 (iModbus RTU)
Iimitha ezi-5, zinokuxhomekeka kwi-ODM kwiimfuno zomsebenzisi
Uhlobo lokuntywila, imibhobho, uhlobo lokujikeleza njl.
Ukusebenza ngumlinganiso wamanzi okwazi ukudlulisa ukuhamba kombane. Obu buchule bunxulumene ngqo noxinaniso lweeon emanzini 1. Ezi ion zihamba zivela kwiityuwa ezichithakeleyo nakwizinto ezingaphiliyo ezinje ngealkalis, iichloride, iisulfide kunye neekhabhonathi. ion ngakumbi ezikhoyo, kokukhona ukuqhuba kwamanzi. Ngokufanayo, ion ezimbalwa ezisemanzini, kuncinci ukuqhuba. Amanzi afihliweyo okanye akhethiweyo anokusebenza njenge-insulator ngenxa yexabiso eliphantsi kakhulu (ukuba alikho kancinci) ixabiso lokuqhuba 2. Amanzi olwandle, kwelinye icala, ane-conductivity ephezulu kakhulu.
Ions ziqhuba umbane ngenxa yeentlawulo zazo ezilungileyo nezingalunganga 1. Xa i-electrolyte inyibilika emanzini, yahlulahlulwa yaya kuhlawuliswa (i-cation) kwaye yahlawuliswa kakubi (anion) amasuntswana. Njengoko izinto ezinyibilikileyo zahlula-hlulwa emanzini, uxinizelelo lwentlawulo nganye elungileyo neyaseleyo zihlala zilingana. Oku kuthetha ukuba nangona ukuhambisa kwamanzi kunyuka nge-ion eyongeziweyo, ihlala ingathathi cala ngombane 2
Isikhokelo sokuqhutywa kwethiyori
Ukuqhuba / ukuhlala kwakhona yiparameter yohlalutyo esetyenziswa ngokubanzi kuhlalutyo lokucoceka kwamanzi, ukubeka iliso kwi-osmosis yokubuyela umva, iinkqubo zokucoca, ukulawulwa kweenkqubo zamachiza, kunye nakumanzi amdaka avela kwimizi-mveliso. Iziphumo ezinokuthenjwa kwezi zicelo zahlukeneyo zixhomekeke ekukhetheni isivamvo sokuqhuba esifanelekileyo. Isikhokelo sethu sokuncoma sisalathiso esibanzi kunye nesixhobo soqeqesho esisekwe kumashumi eminyaka wobunkokeli kushishino kulo mlinganiselo.
Ukuqhuba kukukwazi kwezinto ukuqhuba umbane. Umgaqo apho izixhobo zilinganisa ukuqhuba ngokulula-iipleyiti ezimbini zibekwe kwisampulu, amandla anokufakwa kwiipleyiti (ngesiqhelo i-sine wave voltage), kwaye okwangoku okugqitha kwisisombululo kuyalinganiswa.
I-DDS-1706 yeLebhu yokuSebenza yokuSebenza
I-DDS-1702 yeMeter yokuSebenza yokuPhatha